Tada Never Falls in Love ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
ကျောင်းသား အချစ် ဟာသ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ongoing Anime Series လေးတစ်ခု တင်ပေးမယ်နော် …
အချစ်ဇာတ်လမ်းသာ ဆိုတယ် … နာမည်ကို တစ်ချက်ရှိုးလိုက် … ” Tada Never Falls in LOVE ” တဲ့ … ဘာလားပေါ့ ??? ? ကြာပါတယ် … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးပြောမယ်နော် …
ဂျပန်ပြည်ကိုအလည်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးနဲ့ တဒ-ခွန် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ပန်းခြံ တခုမှာ အလှဓာတ်ပုံ ရိုက်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်း ဇာတ်လမ်းစခဲ့ကြတယ် … တဒ ဆိုတဲ့ ကောင်လေးက အချစ်ဆိုတာကို စိတ်မဝင်စားဘဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လောက်ပဲ စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် …
တဲရဲစ ဆိုတော့ ကောင်မလေးကတော့ ဂျပန်လူမျိုးမဟုတ် ဂျပန်စာကိုမတောက်တခေါက် ပြောတတ်ပြီး ဂျပန် Anime ဖြစ်တဲ့ Rainbow Shogen ကို ကြည့်ပြီး ဂျပန်ကိုအရမ်း လာချင်နေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် …
တဲရဲစ က သူ့အဖော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အဲလက်စ် လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့တူတူ ဂျပန်ကို လာခဲ့ကြတာ … အလည်သက်သက်မဟုတ်ဘူးနော် … နှစ်ယောက်လုံးက ဂျပန်မှာ ကျောင်းလာတက်ကြတာ … ကျောင်းတက်တော့လဲ တဒ နဲ့ တစ်တန်းထဲ … အဲ့လိုနဲ့ တဒ တို့ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားရော …
ဇာတ်လမ်းရဲ့ သဘောအတိုင်း နောက်မင်းသားတစ်လက်ကတော့ ပါရမယ်လေ … သူ့နာမည်ကတော့ ချာလစ် တဲ့ သူကလဲ ပြင်သစ်လူမျိုးပဲ … တဲရဲစ ရဲ့ ကြင်ယာဖက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသူပါ … တစ်နေ့ကျရင် တဲရဲစ က ချာလစ်နဲ့ လက်ထပ်ပြီး လာဆမ်ဘတ် ရဲ့ ဘုရင်မဖြစ်မယ့်သူ တစ်ယောက်ပေါ့ …
ချာလစ်ကလဲ ပြင်သစ်မှာ နွေရာသီကျောင်းပိတ်တော့ ဂျပန်ရောက်နေတဲ့ တဲရဲစ ကို တွေ့ချင်လွန်းလို့ ဂျပန်ကို လိုက်လာခဲ့တယ် …
တဲရဲစ ရဲ့ မျက်နှာလေးကိုမြင်ချင်လွန်းလို့ လာခဲ့တဲ့ ချာလစ်မှာ ဂျပန်လဲ ရောက်ရော … မမျှော်လင့်တာတွေ တွေ့ခဲ့ရတယ် … ချာလစ် မှာ တဲရဲစ ကိုမတရားချစ်ရှာပါတယ် … သူ့ဇနီးလောင်းလေး ပျော်ရွှင်ဖို့သာ အဓိကဟု စိတ်နှလုံးသွင်းထားသူ တစ်ယောက်ပါ …
နိုင်ငံခြားသားပီပီ စကားတွေကိုသွယ်ဝှက်ပြောမနေဘဲ တဲရဲစ ကို အပိုင်း ၁၃ မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်ပုံလေးကို ကြည့်ရင်း ရင်ထဲထိမိတယ် …
တဲရဲစ က တဒ နဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားမှာလား?
ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်ကားနာမည် အတိုင်း တဒ ကလုံးဝမချစ်ခဲ့ဘူးလား?
ချာလစ် ကရော တဲရဲစ နဲ့ လက်ထပ်ဖြစ်မှာလား ?
အဲလက်စ် ကရော ချာလစ်ကိုများကြိုက်နေလား ?
ဇာတ်ကားလေးက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး လူငယ်ဆန်ဆန် ပေါ့ပါးသော အချစ် ရသကို ပေးပြီး ဟာသလဲ ရောထားတော့ ပိုကြည့်ကောင်းပါတယ် … အားလုံးလဲ ကြိုက်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်
ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ Rating အရ IMDb မှာ 7.7/10 နင့် MyAnimeList မှာ 7.6/10 အထိရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ …
Encoder : Kiddo
Episode 08 : Openload Episode 07 : SolidDrive
Director: Mitsue Yamazaki, Yoshiko Nakamura
Starring: Hiro Shimono, Inori Minase, Iwami Manaka, Mamoru Miyano, Shino Shimoji, Shizuka Ishigami, Yuichi Nakamura, Yuuichirou Umehara,
Trailer: Tada Never Falls in Love ( 2018 )